Abuuritaanka BitCAD - Geofumadas
Nofeembar, 2008 AutoCAD-AutoDesk, IntelliCAD
Waxaan u maleynayaa in xayaysiiska BitCAD, ee IntelliCAD, taas oo habka ay tahay habka qiimaha hooseeya ee AutoCAD sida aan kula hadlay waqti ka hor markii aan samaynay dib u eegis ballaaran ee barnaamijkan.
Waxay cashar fiican siinaysaa waaxda suuq geynta ee Manifold hehe
Iyo tan iyo markii aan jeclahay, waxaan u tagi doonaa xayeesiin bilaash ah ... malaha maalin ay i xusuustaan. Waa kuwan tusaalooyin qaarkood
Intaa waxaa dheer, in la abuuro ololeyaal, waxay tilmaamaysaa afarta hub ee waaweyn:
Foomka, Native DWG (waxay yiraahdaan), xitaa illaa AutoCAD 2009
Taageerada, tani waxa loogu talagalay waxa mara ka cabanaya in shirkadaha waaweyn aysan taageerin macaamiisha yaryar
Maqnaanshaha AutoCAD, amarrada badankoodu waxay isla shaqeeyaan isla sida, sida AutoLISP, ADS iyo hababka DCL.
Qiimaha, waa hubka ugu xoogga badan ... wakhtiyada 10 ee hoos ku xusan. Arrintan ayaa la jahwareeray, iyada oo lala kaashanayo bay'ada dhibaatada dhaqaale.
Post Previous«Previous Sidee loo gudbin karaa kml Google Maps
Post Next View Google Street View wuxuu ku yimid GuadalajaraNext »
Hal Jawaab u Jawaab "Abuuritaanka BitCAD"
Luis Villanueva isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa in waxyaabaha ugu muhiimsan aan la muujin, iyo in ka badanaanshaha la qabsashada ee AutoCAD, taageerada DWG ee Consortium waxay u dhigantaa tiro ka mid ah arjiyada CAD. Waxaan aaminsanahay in haddii IntelliCAD ay weerartay warshadda, waxay noqon doontaa geeddi-socod xiiso leh oo loogu talagalay horumarinta suuqa software-ka CAD.